Langue – Malag@sy Miray
Ity lahatsoratra ity dia niaraha-namolavola tamin’ny Mitiyu.wordpress.com « Horizon Azur » sy Blasonmada.canalblog.com 21 Febroary, andro iraisam-pirenena natokana ho an’ny tenin-dreny na antsoina ihany koa amin’ny teny frantsay hoe « Journée Internationale de la langue maternelle ». Tamin’ny taona 2000 no nanombohan’i UNESCO ny fankalazana ity andro maneran-tany ity. Maro tokoa ny fiteny misy maneran-tany ary anisan’izany ny teny Malagasy. Ao anatin’ny teny Malagasy dia maro ihany koa ireo fitenim-paritra izay azo lazaina ho samy manana ny hasina ho azy satria samy manana ny haren-teniny sy ny mampiavaka azy. Raha ny teny Malagasy no asina-teny dia mampalahelo ny milaza fa marary izy. Marary izy satria heverin’ny vahiny fa teny kiringa na hoe « créole » (kreol…
Lahatsoratra voalohany amin’ity taona 2019 ity ito zaraiko aminareo ito. Ny voalohan-teny dia faly miarahaba anareo tsirairay avy tratry ny taona vaovao. Hitondra Soa sy Fanambinana ary Fiadanana ho antsika tsirairay avy anie ity taona ity. Sadaikatra ny tena raha hanoratra io lohateny eo ambony io satria ny lahatsoratra tiana ho zaraina dia amin’ny teny malagasy kanefa ny hevitra tiana ahatongavana dia amin’ny teny frantsay. Ny antony dia tsotra, raha toa ho adika amin’ny teny malagasy ireo dia maro ireo olona hamaky no tsy hahazo izay ho lazaina satria vahoaka miasa, matihanina sy mihetsika na tsorina amin’ny hoe « population active » no tiana ho tratrarina eto. RIGUEUR: Mora ho antsika mponina…